Ntughari Uche Azu Azu Aka - Atụmatụ Echiche Tattoos
Ntughari Inye Azu Aka
1. Ogbugbu akuku na-eji ejiji na-acha odo odo na nke pink na-eme ka mmadu di nwayo
Ndị mmadụ na-enwe mmasị ịnweta egbugbere ọnụ n'akụkụ ya na nhazi ime anwụrụ pink na agba aja aja; Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma
2. Ụdị akụrụngwa maka Ndị inyom na -emepụta ink nke pink na-eme ka ha mara mma
Ụmụ nwanyị na-ahụ aja na-enwe mmetụta igbu egbu na akara ngosi ink nke pink; egbu egbu egbu a na-emetụta akpụkpọ anụ ahụ iji mee ka ha mara mma ma dị mma
3. Egbu egbu egbu maka Ndị inyom na -emepụta ink pink na-eme ka ha dị mma
Brown na-ekpuchi ụmụ nwanyị na-aga maka egbugbere ọnụ na-eji ego pink ink pink; egbu egbu egbu a na-eme ka ha dị ka ndị na-adọrọ adọrọ
4. Egbu egbu maka ndi nwanyi na-eme ka ha mara mma
Okooko osisi pink na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-emepụta Ụdị egbu egbu maka Ụmụ nwanyị na-agbacha agbacha iji mee ka anya dị egwu
5. Mgbu egbu egbu maka ndị ikom na -emepụta ink nke ifuru na-eme ka ha dị ebube
Ndị na-achọ ịdị ebube n'anya ga-ahụ tattoo n'akụkụ ya na nhazi ink nke ifuru
6. Ogbugbu a na-egbu maka ndị ikom na-eme ka ha mara mma
Ndị ikom chọrọ ịma mma ga-ahụ ụdị egbugbu n'akụkụ ya na ink nke imepụta osisi a
7. Ogbugbu aka na ima ima nma na-eme ka mmadu di nwayo
Ndị mmadụ na-enwe mmasị ịnwụ egbugbere ọnụ na ịhụnanya ifuru; Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma
8. Egbu egbu egbu maka ndị inyom na -emepụta ink nke ink na-eweta anya nwanyi
Ụmụ agbọghọ dị ka egbu egbu mara mma na ink nke oji. Ejiji egbu egbu a mara mma.
9. Egbu egbu egbu maka ndị inyom nwere ifuru pink na-eweta ọdịdị ihu ha
Ụmụ nwanyị ndị nwere akpụkpọ ahụ ọkụ na-acha n'anya. egbu egbu a na-acha ọcha akpụkpọ ahụ na agba ọcha na-acha ọcha iji mee ka anya mara mma ma dị mma
10. Egbu egbu maka ndị ikom na nwa nkịta nwa nkịta a na-eme ka mmadụ mara mma
Ndị mmadụ na-enwe mmetụta na-egbu egbu site na mkpịsị nkịkị nwa ink; nke a na-eme ka ha dị oke mma
11. Ogbugbu akuku maka ndi mmadu na-eme ka ha lee anya
Ndị mmadụ hụrụ okpokoro isi na ifuru na-acha anwụrụ ọkụ na-acha anwụrụ ọkụ
12. Egbu egbu n'akụkụ ndị inyom nwere ifuru pink na-enye ha ọdịdị mara mma ma mara mma
Ụmụ nwanyị Brown na-eji egbugbere ink nke ink na-acha odo odo; nke a egbu egbu na-emetụta ahụ mmadụ iji nye ọdịdị mara mma ma dị mma
13. Egbu egbu n'akụkụ ndị inyom na-eji ejiji na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ nke azu na-eme ka ha dị ka mesmeric
Ụmụ nwanyị na - etinye aka na - acha aka na - acha egbuke egbuke Achịcha n'akụkụ ya na nko anụ ọhịa na - acha anụnụ anụnụ; a na-egbu egbu egbu a na-ele ha anya
14. Egbu egbu site na-achacha acha odo odo na-acha odo odo na-eme ka mmadụ anya foxy
Egbu egbu a na-acha odo odo na-acha odo odo na-acha akpụkpọ anụ na-acha aja aja. Ntucha egbu egbu a ga-eme ka nwoke ahụ gbanwee ma ọ bụ na ọ ga-eme ya
15. Egbu egbu egbu maka ndị ikom na-eji akwụkwọ ndụ ink nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-eme ka anya ha jide
Ụmụ nwoke na-acha aja aja na-acha uhie uhie. nke a egbu egbu na-emetụta akpụkpọ ahụ iji mee ka ọhụụ na mmasị mara mma
16. Mgbu egbu egbu maka ndị ikom na-eji nkwekpe ink na-acha odo odo mee ka ha dị jụụ
Ndị mmadụ na-enwe mmetụta igbu egbu site na mkpara ink nke isi ojii mee ka ha yie ihe mara mma ma mara mma
17. Egbu egbu egbu maka ndi nwanyi nwere oji oji na ifuru na-eme ha ka ha di nma
Ndị inyom na-ahụ Ụdị akụrụngwa na mgbịsị ink nke pink na oji; eme ka ha yie ihe na-ekpo ọkụ ma dị mma
18. Egbu egbu egbu maka ndị ikom na -emepụta ink nke pink na-eme ka ha mara mma
Ndị mmadụ na-enwe mmetụta igbu egbu site na imepụta ink nke pink na-eme ka ha mara mma
19. Mgbu egbu egbu maka ndị ikom na-eji ejiji ink na-eme ka anya mara mma
Ndị mmadụ na-ahụ ọnya na-egbu egbu na mkpịsị aka ink nke na-emetụta akpụkpọ anụ ahụ iji mee ka anya mara mma
20. Egbu egbu egbu maka ndị ikom na-eji ejiji ink ojii eme ka ha dị mma
Ndị mmadụ na-ahụ ọnya egbugbu na mkpịsị ink ojii; egbu egbu egbu a na-eme ka ha nwee anya dị mma
21. Egbu egbu egbu maka ndị ikom na -emepụta ink nke ifuru na-eme ka ha dị mma
Ndị mmadụ na-enwe mmetụta igbu egbu site na imepụta ink nke ink; nke a na-eme ha ka ha dị ebube
22. Mgbu egbu egbu maka ụmụ nwoke na-ewu ụlọ ime ink na-eme ka mmadụ dị ka classy
Ndị ikom na-achọ ilekọta classy ga-ahụ ụdị egbu egbu site na ịmepụta ink imewe
23. Mgbu egbu egbu maka ndị ikom nwere ime ụlọ na-eme ka ha dị ebube
Ndị na-achọ ịdị ebube n'anya ga-ahụ tattoo n'akụkụ ya na ime ụlọ
24. Ogbugbu akuku maka ndi mmadu na-eme ka ha lee anya
Ndị mmadụ na-ahụ nwa nwanyị ojii ink imewe egbu egbu iji mee ka ha dị ka dike na ọmarịcha
aka mma akaụmụnne mgbuAnkle Tattoosọdụm ọdụmna-adọ aka mmaegbugbu egbugbuegbugbu maka ụmụ agbọghọarịlịka arịlịkaUche obiụkwụ akaegbu egbu mmiriegbu egbu osisi lotusenyi kacha mma enyiNtuba ntughariỤdị ekpomkpaudara okooko osisingwusi pusiọnwa tattoosEgwu ugoegbu egbu ebighi ebimehndi imewennụnụegbu egbumma tattoosndị na-egbuke egbukeazụ azụzodiac akara akarandị mmụọ oziegbu egbu hennaakara ntụpọegbu egbu diamondrip tattoosGeometric Tattoosegbu egbu okpuegwu egwuenyí egbu egbuaka akaegbu egbu maka ụmụ nwokeakwara obiakpị akpịokpueze okpuezeegbu egbu egbuima ima mmana-egbu egbukoi ika tattooechiche egbugbudi na nwunyeaka akaagbụrụ ebon'olu olu